MAHAMUNI BUDDHIST SOCIETY ၊ ဗုဒ္ဓဂယာသုခါရာမကျောင်း၊ မှ ကြီးမှုး ကျင်းပမည့် မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲ ကို ၃၀.၁၁.၂၀၀၇ မှ ၆.၁၂.၂၀၀၇ ထိ (၇) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နေရာမှာ Kovan MRT အနီးရှိ 33 B Lowland Road SINGAPORE 547429 တွင်ဖြစ်သည်။
စခန်းချိန်အတွင်း တရားအားထုတ်ရန် ယခုချိန်ထိ စာရင်းပေးထားသူပေါင်း အမျိုးသားယောဂီ-၆ ဦး၊ အမျိုးသမီး ယောဂီ(ညအိပ်) ၂၇ ဦး၊ အမျိုးသမီး ယောဂီ(ညမအိပ်) ၅ ဦး၊ ပေါင်း ၃၈ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။
တရားအားထုတ်ချိန်များမှာ နံနက် လေးနာရီ မှ ည ဂ နာရီ ခွဲ အထိ ဖြစ်ပြီး၊ စည်းကမ်းသေ၀ပ်စွာ ကျပ်ကျပ်မတ်မတ် သတိသမ္မဇဉ် အကြားမလပ်ရအောင် အထူးကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
ကျောချစရာ နေရာပင် မလွယ်ကူလှသော စင်္ကာပူ လို နိုင်ငံမျိုးတွင် ယခုလို (၇) ရက်တရားစခန်းများ စီစဉ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အလွန် ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ တတ်အားသ၍ MAHAMUNI BUDDHIST SOCIETY, 23-A Jalan Mas Puteh Singapore 128628 Ph: 6777 7018 တွင် ဆက်သွယ် ကုသိုလ်ယူ၊ လှူဒါန်း နိုင်ကြပါ ကြောင်း ကောင်းမြတ်သည့် အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဌတု
Posted by Philip Shield at 1:04 AM No comments:
Posted by Philip Shield at 2:56 AM 1 comment:
ဒီနေ့ Clementi ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘက် ရောက်ပါတယ်။ ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်ပွဲပေါ့။ ပရိတ်သတ် တွေတော့ ကျောင်းတိုက်နှစ်ခန်းစလုံး တရုံးရုံးနဲ့ အပြည့်ပါပဲ။ နေရာအခက်အခဲကြောင့် မနက်တကြိမ် နေ့လည်တကြိမ် နှစ်ကြိမ် ခွဲပြီး ကျင်းပရ ပါတယ်တဲ့။
ကထိန်လျှာ မြတ်သင်္ကန်းများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်။ ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ ကထိန်အနုမောဒနာတရား နာကြားပြီးတဲ့ အထိခဏနေခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ နေ့ခင်းစာလည်း ကျောင်းမှာပဲ စားခဲ့ကြတယ်။ နေ့လည်စာ တာဝန်ယူကြတဲ့ အလှူ့ရှင်များကလည်း စေတနာသဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာနဲ့ ရောက်လာသမျှပရိသတ်ကို ကျွေးမွေးကြ ပါတယ်။ အလှူထမင်းဟင်းတွေ အချိုပွဲတွေ ကတော့ ရှယ်ပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ရခိုင်ငါးပိထောင်းကလေး ကတော့ တော်တော်ကို ထိတယ်။ ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းလဲ တင်လာခဲ့ပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 5:18 PM3comments:
တစ်ခါတုံးက ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အမေ ဈေးဝယ်တာ လိုက်သွားတယ်။ သူတို့ ဈေးဆိုင် တစ်ဆိုင်ထဲကို ၀င်သွားတယ်။ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်က အင်မချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးကို ကြည့်ပြီးတော့
"သားသားရေ... ဦးဦးမင်းကို ချိုချဉ်လေးတွေ ကျွေးမယ် " ဆိုပြီး ဗူးကို ဖွင့်ပြီးကမ်းပေးလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးလေးက မယူဘူး။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်က နဲနဲ အံ့သြသွားတယ်။ ဒီ ကလေးလေးက အဆန်းပဲ ဘာလို့မယူပါလိမ့် ဆိုပြီး ပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ပဲ "ယူလေ.. သားသား" လို့ ထပ်ပြောကြည့်တယ်။
ဒီတစ်ခါ အမေဖြစ်သူကကြားသွားတယ်... အမေဖြစ်သူက "သား... ယူလိုက်လေ"...
နောက်ဆုံး ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သူ့ဘာသာ ချိုချဉ် လက်တစ်ဆုပ်ကို ယူပြီးပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ကလေးလေးက ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ လက်နှစ်ဖက် နဲ့ ဖြန့်ပြီး ယူလိုက်တယ်။
အပြန် လမ်းမှာ ကျတော့ အမေဖြစ်သူက မေးတယ်။ ဆိုင်ရှင်က သားကို ပေးတုံးက သားက ဘာလို့ မယူရတာလဲ။
ကလေးလေး က ဘာပြန်ဖြေလဲ သိလား..................
မေမေကလဲ သားလက်က သေးသေးလေး။ သားဘာသာ ယူရင် နဲနဲလေးပဲရမှာပေါ့။ ဟို ဦးဦး လက်ကအကြီးကြီး နဲ ပေးတော့ အများကြီးရတယ်။ တွေ့လား။
သင်ခန်းစာ ။ ။ ရယူနိုင်လျှင် ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် သူ့ဘာသူ ပေးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်လျှင် ပို၍ ကောင်းပါတယ်။ သူ့ဘာသာသူ ပေးလာတဲ့ အချိန်မှာ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူလဲ ဖြစ်တယ်... ထင်တာထက်လဲ ပိုရတတ်ပါတယ်။ လစာတို့ ဘာတို့လည်း ဒီလိုသဘောမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 6:56 PM4comments:
Posted by Philip Shield at 6:05 PM4comments:
ဒီနေ့ နဲနဲအားလို့ Windows Movie Maker နဲ့ အတိုအစလေးတွေ ပြန်ဆက် ထားတာ
Posted by Philip Shield at 1:13 PM No comments:
This photo is taken by Ye Lin's phone when we were in Macritchie Reservoir.
နောက်ဆုံး သစ်ပင်ကို လှဲဖြိုပြီးတဲ့အခါ ကျတော့မှ...
နောက်ဆုံး မြစ် ကို အဆိပ်သင့်စေ ပြီးတဲ့အခါ ကျတော့မှ...
နောက်ဆုံး ငါး ကို ဖမ်းပြီးတဲ့အခါ ကျတော့မှ...
ပိုက်ဆံ ဆိုတဲ့အရာဟာ စားလို့မရပါလား ဆိုတာ
သင် တွေ့ရှိ လိမ့်မယ်...
(အင်ဒီယန်း အဘိုးအို တစ်ဦး)
Posted by Philip Shield at 12:09 PM No comments:
မနေ့က U.S က ကိုချစ်ထွန်းဖေ ဆီက အီးမေးလ် တစ်စောင်ရပါတယ်။ မြန်မာ အိုင်တီသမား တွေ အတွက် အထူး website တစ်ခု ning.com မှာ သူစပြီး ထူထောင်ထား ပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ စစချင်း ဒီကွန်ယက်ထဲမှာ ကိုချစ် နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးလည်း Site ကို look and feel လေး နဲနဲ ပြင်ပြီးတော့၊ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ Resources လေးတွေ Knowledge လေးတွေ စတင်မျှဝေကြပါတယ်။ Blog လေးတွေ Discussion လေးတွေ ကျွန်တော်တို့ စရေးလိုက် ကြပါတယ်။ နီးစပ်ရာကိုလည်း Invite လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အံ့သြစရာ ကောင်းတာက စတင်ပြီး ၂၄နာရီအတွင်း Member ၄၅ ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။ အခုရေးနေရင်းနဲ့တောင် တစ်ဦးနှစ်ဦး ထပ်ဝင်လာနေကြပါတယ်။ Member တွေကလည်း စပြီး မကြာမီ အချိန်တွင်းမှာပဲ Blog တွေ post လုပ်ကြ၊ Forum တွေဝင်ရေး ကြပါတယ်။ အားလည်း တက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ညတွင်းချင်းပဲ MyanmarITPros.com ဆိုတဲ့ domain ၀ယ်ပြီး setup လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ နဂိုက mmitpros.ning.com ပါ။
အခု MyanmarITPros.com မှာ လောလောဆယ် Discussion Forum အနေနဲ့
75% tuition waiver scholarship (USA)
International Undergraduate Student Scholarship (University of Dayton, USA)
Can Myanmar sell their IT outsourcing services through ODesk.Com?
Good self-study resources from UC Berkeley
Download Cisco References (Cisco Press Books)
Download MCTS/MCPD Exam Resources here!
Job Oppotunities for Myanmar People
စသည်ဖြင့် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးလျှက် ရှိနေကြပြီး.. Blog တွေအနေနဲ့တော့
Breaking news - @live.com email
Some of Job seeking Tips (Singapore)
Sharing some of IT e-book
Myanmar Onscreen Keyboard Online
စသည်တို့ ၀င်ရောက် ရေးသား ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Special Interest Group အနေနဲ့ကတော့ SIG - Web 2.0 ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ၀င် join နိုင်ပါတယ်။
Launched လုပ်ပြီးပြီးချင်း ရှေးဦးစွာ စေတနာထက်သန်စွာ Post လုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ မျှဝေပေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုအောင်နိုင်ဦးနဲ့ ကိုညီညီထွန်း တို့ကိုလည်း MyanmarITPros.com မှ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း။
Posted by Philip Shield at 1:36 AM No comments:
Google နဲ့ Microsoft တို့ စီချင်း ထပ်ထိုး ကြပြန်ပါပြီ။
Facebook နဲ့ပွဲမှာ Microsoft က တကွက်သာ သွားခဲ့ပါတယ်...(ဒီသတင်းဖတ်ကြည့်)။ ဆုလဒ် အနေနဲ့ နောင်အနာဂတ် Facebook မှာ Microsoft က ကြော်ညာများ ကိုသာ ဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းဟာ "လူတွေလက်ထဲ Free Product တွေ အရင်ထည့်ပေး၊ ကြော်ငြာဘက်မှ ငွေပြန်ရှာ" ဟူသည့်မူ ဖြင့် စီးပွားဖြစ်လာသူ Google အတွက်တော့ "ရည်းစားလူလု အူနုကျွဲခတ်" ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော Facebook နဲ့ပွဲမှာ Google ရှုံးခဲ့ပါပြီ။
The Google OpenSocial site is now live (here).
Posted by Philip Shield at 5:52 PM 1 comment:
"အလျှောက်ကောင်းတော့ အထောင်းသက်သာ" တဲ့။ အင်တာဗျူးတွေမှာ Technical ပိုင်းတွေ မေးတာက သိရင်သိသလို သိပါတယ်၊ မသိရင်မသိသလို မသိပါဘူး လို့ ဖြေလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ အတတ်ပညာရှင် အများစုက အတတ်ပညာကို ပဲ ဇောက်ချလုပ်ခဲ့တော့ HR မေးခွန်းတွေ မေးရင် အဖြေတွေက နဲနဲ ကမောက်ကမ တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လဲ Over-confident တွေဖြစ်ပြီး "တောရဲသား လူကြားထဲ ဆွဲထုတ်" ဆိုသလိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြေလိုက်တာက ရယ်စရာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တခါတလေ အင်တာဗျူးသူတွေက What is your weakness? Tell me about something you failed. Why should I hire you? How do you define success? တို့ ကောက်ခါငင်ခါမေးတတ်ပါတယ်တဲ့။ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်း 64 မျိုးလောက် ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ သူက ဘယ်လိုတွေ မေးမလဲ ကိုယ်ကဘယ်လိုတွေဖြေရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဆိုတာ သိထားရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလား။ ဒီမှာကြည့်ကြပါ။ (Link)
Posted by Philip Shield at 3:19 PM2comments:
တစ်ခါတုံးက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့သားလေးကို လက်ဆွဲပြီး ဂန္ဒီကြီး ဆီကို လာတယ်။
"ဂန္ဒီကြီး... ကျွန်မသားလေး က အချိုတွေ သိပ်စားတယ်။ ကျွန်မလဲပြောတာပဲ... မရဘူး။ ကလေးက စားမြဲ စားတာပဲ။ အဲဒါ ဂန္ဒီကြီး ဆုံးမပေးပါအုံးရှင့်" ဆိုပြီး လာပြောတယ်။
ဂန္ဒီကြီးက ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ "နောက် တစ်လလောက် နေမှ ပြန်လာခဲ့" လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်လလောက်ကြာတော့ အဲဒီအမျိုးသမီး နဲ့ သူ ကလေး ပြန်ရောက်လာပြန်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ဂန္ဒီကြီးက ကလေးကို ကြင်နာစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီး "သားလေး... အချိုတွေ သိပ်မစားနဲ့" လို့ ရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီတော့ ကလေးလေး က ရွှန်းရွှန်းစားစား ပြန်ကြည့်ပြီး "ဟုတ်ကဲ့" လို့ပြောလိုက်တယ်။
အဲလိုနဲ့ ကလေး အမေက "ဂန္ဒီကြီးရယ် ဒါလေးပြောတာများ အရင်လတည်းက ပြောလိုက်ရောပေါ့" လို့ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။
အဲဒီတော့မှ ဂန္ဒီကြီးက "ငါလည်း အရင်တုံးက အချိုတွေသိပ်စားတယ်... ဒါပေမယ့် အရင်တလက စပြီး ငါအချိုတွေ မစားတော့ဘူး... ရှောင်လိုက်ပြီ... ဒီကလေးကို အချိုမစားနဲ့ လို့ ဆုံးမဖို့ ဆိုတာက ငါက အရင်ဦးဆုံး အချိုမစားတဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။"
Posted by Philip Shield at 9:50 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 7:31 PM No comments:
ယခုတလော Facebook.com ဟာ တစ်နေ့တခြား လူကြိုက်အများဆုံး နဲ့ အကြီးဆုံး online social network website တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ Facebook ရဲ့ Architecture သည်ကောင်းမွန်လှပြီး Extensible ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါသနာပါရင် Facebook Markup Language ကို သုံးပြီး ကိုယ့်ဆောဖ်ဝဲကို ၀င်ရေးကာ အွန်လိုင်းပေါ်တင် ဖြန့်ချီလို့ရပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ Features များမှာ လူများစွာက ၀ိုင်းရေးထားသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ၀ိုင်းစမ်းသုံးကြပြီး ကောင်းမှ ဆက်သုံးကြ သောကြောင့်လည်းကောင်း စုံလည်းစုံ အလွန်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ "ဥပမာ။ ။ သင်ဟာ သင့် သူငယ်ချင်းဆီကို ပန်းအိုးလေး ပို့ပေးလို့ရပါသည်။ ပန်းအိုးလေး က တစ်နေ့တခြားကြီးပြင်း လာပါလိမ့်မယ်။ သူငါ့ကို ဘာပေးထားတာပါလိမ့်၊ ဘာပန်းပွင့်လေး ပွင့်လာမလဲ စသည်ဖြင့် ရင်တထိတ်ထိတ် စောင့်ကြည့်ရပါတယ်။ ဒါနမူနာ ပြောပြတာပါ၊ "ဥ"ကလေး ပေးတာမျိုး တွေလဲရှိတယ်။ အရုပ်လေးတွေ လဲ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရတယ်။ သီချင်းလေးတွေ လည်း မျှဝေလို့ရတယ်။ Facebook ထဲမှာတင် MyGarden application နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်လေး စိုက်ထားလို့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက လက်ဆောင် ပေးထားတဲ့ ပန်းလေးတွေ ဖူးပွင့်နေ တာကို ကြည်နူးလို့ရတယ်။ ဗေဒင်ဝါသနာပါရင်လည်း နေစဉ်ဟောစာတမ်း Application ကို Install လုပ်လိုက်ရုံပဲ.. ၀ါသနာ တူရာတူရာ Group တွေထဲ ၀င်လို့ရတယ်။ " အဲဒါတွေ ကြောင့် နာမည်ကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ Freindster တောင်မှ လူကြိုက်နည်းနည်းလာပြီး တနေ့တခြား မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် မယ့်ပုံစံရှိတယ်။ Microsoft ဟာ အွန်လိုင်းစစ်ပွဲမှာ ခံတပ်များစွာ ကို ကျဆုံးခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ MySpace သည်ပင်လျှင် ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ရပြီလို့ ပြောရမလားပဲ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရှုံးခဲ့သမျှ အဖတ်ဆယ်ဖို့ ၁၅ ဘီလီယံ တန်ကြေးရှိတဲ့ Facebook ကနေ ၂၄၀ မီလီယံ တန်ကြေးရှိသော ကြော်ညာအပိုင်းလေးကို ကမန်းကတမ်း ၀ယ်ယူလိုက်ပုံရတယ်။
Posted by Philip Shield at 12:34 AM No comments:
ကြားဖူးတဲ့ ဟိန္ဒူပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ် ပြောပြမယ်။ တစ်ခါက နာရာဒ ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုပဲ၊ အဲဒီလူဟာ ကောင်းကင်ဘုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောလို့ရတယ်တဲ့။ တစ်နေ့မှာ နာရာဒဟာ တောအုပ်ကြီး တစ်ခုအတွင်းကို ဖြတ်ဝင်သွားတယ်။ သစ်ပင်တစ်ပင် အောက်မှာ ယောဂီကြီးတစ်ဦး ထိုင်နေတာကို တွေ့ရတယ်၊ သူ့ရဲ့ အကျင့်က ထိုင်ပြီးကျင့်ရတဲ့ အကျင့်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီယောဂီကြီးကို နာရာဒက "ဒီနေ့ ကောင်းကင်ဘုံက ပဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိတယ်၊ ဘာမှာ အုံးမလဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ယောဂီကြီးက "ကျုပ်ဒီလို ထိုင်ပြီးကျင့်နေတာ အနှစ်လေးဆယ်ရှိပြီ၊ ဘယ်တော့ ကောင်းကင်ဘုံ တံခါးကို ဖွင့်ပေးမလဲ လို့ မေးလိုက်စမ်းပါ" လို့ ပြန်ပြီးပြောတယ်၊ အဲဒီမှာ နာရာဒက "ကောင်းပြီလေ၊ မေးပေးပါမယ်" ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်၊ တောနက်ထဲရောက်တော့ ကောင်းကင်ကို မော့ပြီး ယောဂီကြီး မေးတဲ့စကားကို ကောင်းကင်ဘုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို မေးပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကောင်းကင်ဘုံက အသံတစ်သံကြားရတယ်။ "အဲဒီယောဂီထိုင်နေတဲ့ သစ်ပင်မှာရှိတဲ့ သစ်ရွက် အရေအတွက်ဟာ သူဖြည့်ကျင့်ဖို့ ကျန်တဲ့ ဘ၀အရေအတွက်ပဲ" လို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်။ အဲဒီအဖြေကို နာရာဒက ယောဂီကြီးထံ ပြန်လာပြီး ပြောပြတယ်၊ အဲဒီမှာ ယောဂီကြီးက အတော်ကို ဒေါပွသွားတယ်၊ အခုလုပ်လာတာလည်း အနှစ်လေးဆယ်ရှိပြီ၊ ဒါကလည်း မပြီးသေးဘူး၊ နောက်လုပ်ရမည့်ဟာတွေကလည်း နှစ်တွေမဟုတ်ဘူး၊ ဘ၀တွေတဲ့၊ သစ်ရွက် အရေအတွက်လောက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ သစ်ရွက်အရေအတွက်ကလည်း မနည်းဘူး၊ သစ်ပင်ကလည်း မကျည်းပင်၊ မလုပ်တော့ဘူး၊ ပြန်မယ် ဆိုပြီး ထပြီးပြန်သွားတယ်။
အဲဒီအခါမှာ နာရာဒဟာ ရှေ့ဆက်ပြီး လျှောက်သွားတော့ သစ်ပင် တစ်ပင် အောက်မှာ ယောဂီလူငယ်တစ်ယောက် ခုန်နေတာကို တွေ့ရတယ်၊ အဲဒီယောဂီလေးကို နာရာဒက ကောင်းကင်ကို ဘာမှာချင်သေးလဲ။ သူဒီနေ့ ကောင်းကင်ဘုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောစရာရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီယောဂီလေး ကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်က ခုန်ပြီးကျင့်တဲ့ ကျင့်စဉ်လိုတယ်၊ ယောဂီလေးက "ကျုပ်ကတော့ ကျင့်နေတာပါပဲ၊ ကောင်းကင်ကို မေးပေးစေချင်တာကတော့ နောက်ထပ် ဘယ်လောက် ခုန်ရအုံးမှာလဲ" လို့ပြန်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ နာရာဒက တောထဲကို ၀င်သွားတယ်၊ ကောင်းကင်ကို မော့ပြီးတော့ ယောဂီလေးအတွက် မေးပေးပြန်တယ်၊ ကောင်းကင်ဘုံကလည်း ပြန်ပြီးဖြေတယ်၊ "ဒီတောထဲမှာရှိတဲ့ မကျည်းပင် တွေမှာရှိတဲ့ မကျည်းရွက်ကလေးတစ်ရွက်ဟာ ဘ၀တစ်ခုပါ။ အဲဒီဘ၀တွေလောက် ခုန်ပြီးရင် တံခါးဖွင့်ပေးမယ်" လို့ပြန်ပြီးပြောတယ်၊ အဲဒီတော့ နာရာဒဟာ ယောဂီလေးဆီပြန်လာပြီး အဲဒီအတိုင်း ပြန်ပြောတယ်၊ ယောဂီလေးဟာ နာရာဒရဲ့ စကားကို ကြားတာနဲ့ အတော်ကို ပျော်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ ... "ကော်တာပဲ၊ အရင်တုံးက ဘယ်လောက် လုပ်ရမှန်းမသိပဲ လုပ်နေရတာ၊ အခုတော့ အရေအတွက် သိရပြီ။ ဒီအချက်ဟာ အားရှိစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်ပဲ၊ ဆက်ပြီးခုန်မယ်" လို့ပြောပြီး ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခုန်လိုက်တယ်၊ အဲဒီအခါမှာပဲ ကောင်းကင်ဘုံက ကောင်းချီးပေးသံကြားရတော့တယ်၊ တံခါးဖွင့်လိုက်ပါပြီတဲ့။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ရင်ယောဂီအိုကြီးဟာ အတော့်ကို အကြောင့်အကျ များတယ်၊ ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီ။ ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ။ အဲဒီလောက်အများကြီးဆို ခက်တော့တာပဲ၊ ဘာညာပေါ့။ ယောဂီလူငယ်လေးကတော့ အကြောင့်အကျနည်းတယ်။ အရေအတွက် ကို မေးမယ့်မေးတာပါ။ သူ့သဘောထားကတော့ မပွင့်မချင်း ခုန်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးရှိပြီးဟန်တူပါတယ်။ အဲဒီလူမျိုးတွေ အတွက် အရာခပ်သိမ်းဟာ အစဉ်သဖြင့် ပွင့်နေပါတယ်....။
မင်းသိင်္ခ ၏ မနောမယ ကိုပီတာမှ
Posted by Philip Shield at 4:25 PM 1 comment:
Bountii isanew price search engine started by two founders from the latest Y Combinator class. They focus on the incredibly popular and competitive category of electronics, currently crawling over 30 merchants. Bountii says they differentiate themselves from other price search engines by digging deeper into the prices. Their data includes shipping and handling, and finds especially low prices normally hidden from basic searches, like the ones Costco only shows at check out. The system can add shipping and handling by zip code.
Posted by Philip Shield at 2:18 PM No comments:
ကျွန်တော် Australia migration ကိစ္စလုပ်တုံးကတော့ OCSC ဆိုတဲ့ agent(immigration consultancy) နဲ့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ nTrust ဆိုတာလည်း စုံစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ nTrust က တွေ့တွေ့ချင်း consultation fee ဆိုပြီး150$ တောင်းတယ်။ Agent Fee လည်းပိုများတယ်။ အဲဒါနဲ့ nTrust နဲ့ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ OCSC က ဈေး ပိုသက်သာတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်မအပ်ခင် consultation ကို အလကား လုပ်ပေးတယ်။ စိတ်လည်း ရှည်ကြပါတယ်။ အဲဒီရုံးက Orchard ဘက်က Shaw Centre မှာရှိတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ လည်းအများကြီးပါ။ သူ့လိုင်းနဲ့သူ တစ်ဦးချင်းရှိကြတယ်။ ဥပမာ... သူတို့နဲ့ တကယ်လုပ်ဖို့ စာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ IT လိုင်းဆို IT သမားတွေအတွက် migration consultant အထူး လုပ်ပေးတဲ့ သူနဲ့ ဆက်လုပ်ရတယ်။ သူကမှ လိုတဲ့ စာရွက်စာတမ်း ရေးပုံသားပုံ အသေးစိတ် ညွှန်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကို certified true copy လုပ်ရပါတယ်။ လိုတဲ့ Certified True copy တို့ဘာတို့ ကို သူတို့ရှေ့နေနဲ့ သူတို့ လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သပ်သပ်ပေးရတယ်... သိပ်တော့ မကုန်ပါဘူး... ကျွန်တော့်တုံးကတော့ ရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ latest payslips တွေပါမကျန်... အကုန် certified true copy လုပ်လိုက်တယ်။ ရှေ့နေခ ဆိုပြီး 50-100 လောက် သပ်သပ်ပေးရတယ်။
အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အောက်ပါလိပ်စာတွေမှာ ဖုံးဆက်ပြီး မေးမြန်း စုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ Email နဲ့ မေးလို့လည်း ရပါတယ်။ လူသွားတွေ့ လို့ လဲရပါတယ်။ ဈေးတွေလည်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Agent သုံးတာ မသုံးတာ အပထား သိထားတော့လည်း ကောင်းတာပေါ့။
OCSC - Singapore
#26-10 Shaw Centre
Tel: +65 6238 0777
Fax: +65 6734 3706
AMCIS House, Level 5
During office hours: (+65) 6535 1611
After office hours: (+65) 9828 0183
Fax: (+65) 6535 1621
Posted by Philip Shield at 10:01 AM 10 comments:
ဖြောင့်ဖြောင့် သွား လျှင်ခရီးတွင်မည်။ ကွေ့ကောက် သွားက ခရီးကြန့်ကြာမည်ဟု အမရပူရမြို့ မဟာ ဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး က နံနက်ခင်းဩဝါဒများ တွင် မြွက်ချွေ ဆုံးမ ခဲ့လေသည်။ အလွန်အဓိပ္ပာယ် ထိမိလှ၏။ တန်ဖိုးရှိလှ၏။
လောကအသီးသီး အလွှာအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကိုယ့်အယူအဆ၊ ကိုယ့်မူဝါဒ၊ ကိုယ့်လမ်းစဉ်နှင့်ကိုယ် ခရီးချီ နေကြရာတွင် ဖြောင့်ဖြောင့်သွားဖို့လိုပါ၏။ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှသာခရီးတွင်ပါလိမ့်မည်။ ဘုရားရှင်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းဟူသည် မာယာသာဌေယျ ကင်းရှင်းခြင်းကို ခေါ်သည်ဟု မိန့်၏။
မာ ယာဟူသည်ကိုယ့်မှာရှိနေသည့်အ ပြစ်ကို သူများမသိအောင် ဆင်ခြေအမျိုးမျိုး ဖုံးကွယ်ခြင်း ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သာဌေယျက ကိုယ့်မှာမရှိသောဂုဏ်၊ မရှိသော အရည်အချင်းကို ရှိဟန်ဆောင်ခြင်း၊ ရှိ သည်ထက်ပိုအထင်ကြီးအောင် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ခြင်း၊ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးလုပ်ခြင်း၊ ဟိတ်ဟန် များခြင်းဖြစ်၏။ မာယာက ရှိတာကိုမရှိဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၏။ သာဌေယျက မရှိတာကိုရှိဟန်ဆောင် ခြင်းဖြစ်၏။ နှစ်ခုလုံးဟန်ဆောင်တာချင်းကတော့ တူ၏။ ထိုသို့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ခြင်းသည် မြင်ရသူ၊ သိရသူ၊ အမြင်မှား၊ အမှတ်မှား၊ အသိမှားသွားအောင် လှည့်စားခြင်း၊ လိမ်ညာ ခြင်းပင် ဖြစ်၏။
လူအများစုသည် အပြစ်မကင်းကြ။ သို့သော် ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်မြင် ကြ တာမဟုတ်။ မြင်ပါသော်လည်း မပြင်ချင်ကြ။ အပြစ်ရှိပါလျက် အပြစ်တင်ပြန်တော့လည်း မကြိုက် ပြန်။ အပြစ်ကိုလည်း ဝန်မခံချင်။ အပြစ်ပြောတာ ကိုလည်းမကြိုက်။ အပြစ်ကိုလည်း မပြုပြင်ချင်။ ထို သဘောထား အားလုံးသည် မာယာတွေပဲဖြစ်၏။ လူ၏အပြင်းပြဆုံးအာသာက အထင်ကြီးမှုကို ခံယူ လိုခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူများအထင်ကြီးအောင် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ကြ၏။ ဟိတ်ကြီးဟန် ကြီးလုပ်ကြ၊့ ကားကြ၊ ဝါကြ၊ ညာကြ၏။
ဘုရားရှင်က လူတစ်ယောက်၏ အရည်အသွေးကိုပြဆိုရာ၌ သက္ကော-စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ ဥဇု- ရိုးဖြောင့်ရမည်။ သုဟုဇု- ထို့ထက်ပို၍ ရိုးဖြောင့် ရမည်ဟု မေတ္တာသုတ်နိဒါန်းမှာ ဟောကြားညွှန်ပြ ခဲ့၏။ လောက မှာလူတော်လူကောင်းဟု သတ်မှတ်ရာ၌ လူတော်ဖြစ်ဖို့အတွက် သက္ကော-တစ်ခုခုစွမ်းဆောင် နိုင်ရ မည်။ လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက် ဥဇု- ရိုးဖြောင့်ရမည်။ သုဟုဇု- ထို့ထက်ပို၍ ရိုးဖြောင့် ရမည်။ အရည် အချင်းရှိသူက လူတော်၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူက လူကောင်း၊ နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံလျှင်တော့ သိပ်ကောင်း မည်။ တစ်ခုသာရွေးချယ်ခွင့်ရှိလျှင်တော့ မတော်ချင်နေပါစေ၊ ကောင်းတာကိုသာရွေးတော့မည်။
ရိုးသားမှုသည်စိတ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေ၏။ စိတ်ထဲကရှင်းနေမှ မျက်နှာကလည်းရှင်း၏။ စိတ်ထဲကမရှင်းလျှင် မျက်နှာကလည်းမရှင်း၊ ရှုပ်နေ၏။ ရှုံ့နေ၏။ မှုန်သုန်နေ၏။ မကြည်လင်ဖြစ်နေ ၏။ ရှင်းသောမျက်နှာနှင့် မရှင်းသောမျက်နှာနှစ်ခုသည် အလွန်ကွာခြား၏။ ရှင်းသော မျက်နှာက ကြည်လင်နေ၏။ အေးချမ်းနေ၏။ ဖြူစင်နေ၏။ ကျက်သရေရှိနေ၏။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖြောင့်ဖြောင့်စင်းစင်း ဟူသောဂုဏ်သည် သမိုင်းတင်၍ မော်ကွန်းဝင်သော ဂုဏ်ဖြစ်၏။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြောင့်ဖြောင့်စင်းစင်းနှင့် လုပ်မှသာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို အမှန်တကယ်ရောက်ရှိ နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးတော်ရှင် အမရပူရမြို့၊ မဟာ ဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ဖြောင့်ဖြောင့်သွားလျှင် ခရီးတွင်မည်။ ကွေ့ကောက်သွားကခရီးကြန့်ကြာမည် ဟု ဆုံးမတော်မူ ခဲ့ဖူးလေသည်။
Posted by Philip Shield at 1:01 PM No comments:
ယခု တစ်ခေါက် Employment Letter ရေးသားနည်း ကို မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။ အောက်ပါရေးနည်းမှာ MODL ၀င်နိုင်စေရန် ပံ့ပိုးမှုပေးသော ရေးသားပုံနမူနာ ဖြစ်တယ်။ မူရင်းကို ကျွန်တော့် Migration Agent ထံမှ ရခဲ့ပါသည်။ MODL ၀င်သွားလျှင် နေရင်းထိုင်ရင်း 15 မှတ်ပိုရမယ်။
တကယ်တမ်း Employment Letter ကို Company Letter Head ဖြင့် ထုတ်ခိုင်း လို့ရနိုင်လျှင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Letter Head ဖြင့်ထုတ်လို့မရနိုင်ခဲ့လျှင် ကုမဏ္ဏီ လိပ်စာ ကို မိမိဘာသာရိုက်ထည့်ပေး လိုက်ရပါမယ်။ အဲဒီလို လိပ်စာမပါခဲ့လျှင်လည်းရတော့ရပါသေးတယ်... စာရွက်ပေါ်မှာ လိပ်စာနဲ့ပါတ်သက်တာ ဘာမှ မပါလျှင် အနည်းဆုံး လက်မှတ်ထိုးပေးသူ ကုမဏ္ဏီလူကြီး၏ Business Card တော့ ပါရပါမယ်။ နောင်တွင် Australia Government မှ သင့်မှာ တကယ့်စစ်မှန်သော Experience ရှိမရှိ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်ဖြင့် စုံစမ်းမှာမို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။* Relevant Experience အနည်းဆုံး ၃ နှစ် ရှိရပါမယ်။
အောက်ပါနမူနာပုံစံကိုကြည့်ပါ။ ဒီလိုပုံစံရေးနည်း ကတော MODL မှ (2231-79) Computing Professional - specialising in C++/C#/C တွင်ဘောင်ဝင်စေရန် ရေးသားနည်း ဖြစ်ပါတယ်။
This letter is to certify that (applicant name) isapermanent full-time employee working in our organization as (Designation Title) since (start date) till present / (last day of service).
(applicant name)’s duties and responsibilities for the above-mentioned designation includes:
(အောက်ပါ list မှာ နမူနာဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့် သင့်တော်သလို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး ပြန်လည်ရေးသားရပါမည်။ နှစ်ခုလောက် သုံးခုလောက်ပါလျှင် လုံလောက်သည်။)
Plan, coordinate and liaise with users and the development team on system requirements gathering, documentation, technical evaluation
Develop detailed architecture and designs, then write the code [e.g. using C, C#, C++ for an embedded platform] (please specify) to implement it
Development of the application in .NET, C#, C++, XML, SQL Server (please specify)
Software development on Windows using MS Visual C++
Design, develop and document software components in Visual C++ in the Windows environment, using DirectX for 3D graphics development (please specify)
Design, development and upgrade of system and applications (e.g. real-time systems) in C & C++
Developing and maintaining application software and web based applications associated with C / C++ / C# programming
Involved in creation and performance of user acceptance tests for system implementation projects
To perform detailed software and application designing, programming and documentation for business group users
Conduct software development for Production and Hardware Reliability Test
Problem solving (debugging code)
Conduct testing – Unit and system level tests
testing complex web services, internet-based services and related applications
Perform migration of existing software systems in C++ into ? (please specify) platform (e.g. Microsoft.Net platform)
Perform software releases to clients and dispatch the software
Product documentation e.g. user manuals, installation manuals, reference manuals, online help
If you need further information, you can contact the undersigned at Tel: ???? or via email: ????.
Full Name (Mr./Miss/Mrs.)
Position held (eg. Manager/Director etc.)
(Company Full Address)
Posted by Philip Shield at 4:51 PM3comments:
အရင်လက Macritchie Reservoir ဘက်ရောက်လို့... စိတ်နှလုံးကို အေးချမ်းစေတဲ့ သဘာဝအလှအပလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 12:08 PM No comments:
ဟိုးတစ်ပါတ်လောက်က ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားရင်း Ann Mo Kio MRT နားလေးမှာ တရုတ်လက်ရေးစာရေးနေသူတစ်ဦးတွေ့ပါတယ်။ ဘာတွေရေးနေမှန်းတော့ မသိပါဘူး။ သူရေးတာ အတော်လေးတော့ ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ အဆုံးသတ်နားလေးထိကြည့်ကြည့်.. ဘယ်လက်ရော ညာလက်ရော နှစ်ဘက်လုံး စုံချရေးတာ စာလုံးသုံးလုံး တပြိုင်တည်းထွက်တယ်ဗျ။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါလေးကို မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း မျှဝေကြည့်စေချင်တာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 11:41 AM No comments: